"Ry rahalahy- miteny araka ny fanaon’ny olona aho - na dia ny fanekena ataon’olona ihany aza, rehefa vita mafy, dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin’i Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe: Ary ho an’ny taranaka, toy ny milaza ny maro; fa toy ny milaza ny anankiray, ary ho an’ ny taranakao, dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko: Ny fanekena izay nataon’Andriamanitra mafy fahiny dia tsy tsoahan’ny lalàna, izay vao natao telo-polo amby efa-jato taona tato aoriana, hahafoana ny teny fikasana. Fa raha avy amin’ny lalàna ny lova, dia tsy avy amin’ny teny fikasana intsony; nefa tamin’i Abrahama dia teny fikasana no nanomezan’Andriamanitra azy. Inona ary ny lalàna? Nanampy noho ny fahadisoana izy ambara-pihavin’ny taranaka izay nomena ny teny fikasana; ary nalahatr’anjely teo an-tànan’ny mpanalalana izany. Ary ny mpanalalana dia tsy an’ny irery, fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan’Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria izany! Fa raha nisy lalàna mahavelona nomena, dia avy tamin’ny lalàna tokoa ny fahamarinana Fa ny Soratra Masina efa nanidy azy rehetra teo amin’ny fahotana, mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an’i Jesosy Kristy. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana, dia voambina tao ambanin’ny lalàna isika ka voahidy ho amin’ny finoana izay efa haseho ato aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin’i Kristy, mba hohamarinina noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana, dia tsy fehezin’izay mpitaiza intsony isika. Fa hianareo rehetra dia zanak’Andriamanitra amin’ny finoana an’i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an’i Kristy dia nitafy an’i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany hianareo rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Fa raha an’i Kristy hianareo, dia taranak’i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana." Galatianina 3:15-25
Ny Teny fikasana. Amin’ny maha-voafetra ny fijery sy ny fahatakarantsika olombelona, dia ny sarin’ny fifanekena/didim-pananana eo amin’ny fiainantsika no raisin’ny Soratra Masina ho ohatra: tsy tokony ovaina na ampiana ny fanekena. Torak’izany hoy i Paoly ny fanekena nataon’Andriamanitra. Azo antoka ny Teny fikasana momba ny finoana, izay nomena an’i Abrahama telopolo amby efajato taona talohan’ny lalàna; na tsy voafehin’ny fotoana sy ny toerana aza Andriamanitra, dia nanaiky handray ny fomba fijerintsika olombelona. Ny Teny nolazainy ao amin’ny Baiboly, dia marina ary tsy misy fifanoherana velively. Araka izay voalaza hoe: “tsy tsoahan’ny lalàna” (17), dia ampaherezin’ny Soratra Masina isika hifototra tsara ao aminy, “mba tsy ho zaza intsony, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana” (Efesianina 4:14).
Ny lalàna mpitaiza. Mpanampy ny lalàna hoy ny Apostoly Paoly. Izy no niaro mba tsy hibahana teo anivon’ny fiarahamonina ny korontana sy ny fanjakan’ny Baroa. Vao miha-maneho ny fahalemen’ny olombelona izay tsy mahavonjy tena anefa izy. N’inon’inona tokoa mantsy ezaka hasehon’ny olombelona te-hanao ny tsara, sy hankatò ny didy rehetra, dia hita mazava fa tsy vitany izany. Na i Paoly tokoa aza moa ange dia nikiaka hoe: “fa tsy izay sitrako no ataoko ; fa izay halako no nataoko” (Rômanina 7:15)
Tanterahin’Andriamanitra tao amin’i Jesosy Kristy ny halehiben’ny fahasoavany: navoakany avy tao amin’ny gadran’ny lalàna isika (23), ka afaka tamin’ny vahohon’ilay mpitaiza!